Maitiro ekuisa Firefox 58 pane Debian 9 | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla yakaburitsa vhezheni 58 yeMozilla Firefox mazuva mashoma apfuura. Iyi vhezheni nyowani haingogadzirise pane vhezheni yekupedzisira chete asi inogadzirisa zvimwe zviputi uye kutaridzika kweMozilla Firefox. Firefox 57 kana inozivikanwa zvakare seFirefox Quantum yakaratidza kuva budiriro yeMozilla Foundation, zvichikonzera vashandisi vazhinji kudzokera kuFirefox seye chete browser yeiyo inoshanda sisitimu.
The users of Debian isu tinofanirwa kumirira zvishoma kuti tive neFirefox 58 zviri pamutemo kunyangwe paine nzira yekuiwana zvisiri pamutemo asi uchishanda zvakakwana paDebian 9.
Kuti uwane Mozilla Firefox 58 kana chero imwe vhezheni yeramangwana yeFirefox, isu tinofanirwa kuvhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
wget -L -O firefox.tar.bz2 'https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&amp;os=linux64&amp;lang=es-ES'
Iye zvino tinofanirwa kufambisa iyo yakadhirowewa faira kuFirefox dura reImba yedu. Kune izvi tinonyora zvinotevera:
Uye ikozvino isu tinopinda firefox dhairekitori uye nyora zvinotevera:
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>~/firefox/firefox
Izvi hazvingomhanye chete yazvino vhezheni yeMozilla Firefox asiwo ichatibvumidza kugadzira mapfupi kana kuwedzera kune zvido zvedu yazvino vhezheni yeiyi inozivikanwa webhurawuza.
Pakutanga takataura kuti nzira iyi inoshanda zvese paFirefox 58 uye neshanduro dzeramangwana. Maitiro acho akafanana uye nenyaya yekushandisa uye kushandisa nzira iyi, pese patinozviita, Debian anotibvunza kana tichida "kutsiva" kana "kunyora" mafaira. Kune izvo zvatinofanirwa kudzvanya Yes bhatani uye kana yapedza kuita ichi chiitiko, isu tichafanirwa kuve neazvino vhezheni yeMozilla
Sezvauri kuona iwo maitiro akareba asi kwete akaomesesa. Maitiro achatibvumidza isu kuve neyekupedzisira vhezheni yeMozilla Firefox muDebian 9 kubvira iro repamutemo reMozilla repository pamwe nerekare reDebian repository zvinotora nguva kuve neiyi vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa Firefox 58 pane Debian 9
Agustin Borrego Leiva akadaro
Mhoro uye masikati akanaka / manheru. Kwemazuva mashoma ndanga ndichiona kuti pane dambudziko kana iwe ukaisa iyo Linux mirairo, nekuti iyo HTML kodhi iri kusefa.
Pindura Agustín Borrego Leiva
Chinyorwa chakanaka kwazvo, chinogara chichindinetsa kuisa firefox pane debian, ikozvino kuoma kwapera. Kwazisai uye ndinokutendai zvikuru.
Izvo zvandisinganzwisise ndeyekuti havaise sei yakagadziridzwa firefox mumashure uye esr mune zvakajairika marekodhi, saka mushandisi aizoiisa zviri nyore, imwe nzira yekuisa firefox 58 ndeye kurodha pasi firefox package uye mutauro mutauro kubva kune linux mint. repositori chete maviri mapakeji uye woamisa iwo ne dpkg -i
Ndini ndega ndinoratidzwa mirairo ine html kodhi?
Pindura kuna Arkhej
Ini ndinofunga yekupedzisira nhanho ine kukanganisa